Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Airbus Waxay Bilaabeysaa Adeeg Tababar Duulimaad Ku saleysan Daruuro
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Khibrada Tababbarka Mobile Airbus Suite waa madal adeeg-bixin ku saleysan rukhsad leh oo leh jawi is-dhexgal farsamaysan oo is-dhexgal ah oo 3D ah oo loogu talagalay tijaabada soo noqnoqoshada iyo bilowga Nooca Tababarka.
Airbus waxay soo saartay MATe iyada oo maskaxda lagu hayo isla markaana waafaqsan.
MATe Suite waxaa loo heli karaa xirmo caadi ah oo leh qaabab iyo adeegyo ikhtiyaari ah oo loo habeyn karo iyadoo loo eegayo baahida shirkadaha diyaaradaha.
Duuliyayaashu waxay adeegsiga u adeegsan karaan inay ku tababaraan markasta iyo meeshii ay doonaan.
Airbus waxay soo saartay waayo-aragnimada Tababbarka Mobile Airbus (MATe) Suite, oo ah adeeg-ku-saleyn ku-saleysan adeegga oo leh 3D jawi farsameysan oo is-dhexgal ah oo loogu talagalay tijaabada duulimaadka soo noqnoqda iyo bilowga Nooca.
Airbus horumariyey MATe iyada oo maskaxda lagu hayo oo la is waafajin karo. Dhisida guusha Tababaraha Airbus Cockpit (ACE), oo ah jilitaan jilicsan oo jilicsan oo loo adeegsado xarumaha tababarka ee Airbus ee loogu talagalay koorsooyinka Ruqsadda Duulista Duulimaadka, Xalka MATe waa loo oggol yahay nooc kasta oo qalab IT ah. Duuliyeyaashu waxay markaa adeegsiga u adeegsan karaan inay ku tababaraan markasta iyo meel kasta oo ay doonaan, iyadoo tababarayaashu awood u leeyihiin inay la socdaan oo ay raacaan horumarkooda iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda ugu dambeysa ee daruuraha.
Waxaa hada loo hayaa A320 Qoyska, MATe oo heysata duulimaadka “karti ku saleysan” falsafada iyo Tixraaca Tababbarka Duulimaadka (AFTR). Xalka, oo bixiya faa'iidooyin badan; haynta aqoonta wanaagsan iyo waqtiga muhiimka ah ee keydinta aaladaha tababarka sare iyo jilistayaasha, ayaa waxaa soo dhoweeyay shirkadaha diyaaradaha, iyadoo heshiisyo ay horey u kala saxiixdeen dhowr macaamiil ah; Yurub - Hawada Malta - iyo diyaaradda ugu weyn ee rakaabka Hindiya -IndiGo.
MATe Suite waxaa loo heli karaa xirmo caadi ah oo leh qaabab iyo adeegyo ikhtiyaari ah oo loo habeyn karo iyadoo loo eegayo baahida shirkadaha diyaaradaha. Xalka waxaa loo heli doonaa labada A330 iyo A350 horaanta 2022.